रोकिएन खाने तेलमाथिको चलखेल - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
रोकिएन खाने तेलमाथिको चलखेल
मेरो लाइफस्टाइल || 12 March, 2021
गत तिहारताका शुरु भएको खाने तेलमाथिको चलखेल अझै रोकिएको छैन । उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी मूल्यवृृद्धि हुदाँ पनि सरकार भने रमिते बनेको छ ।
तिहारपछि खाने तेलमा एक्कासी मूल्य बढेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि सरकारले देखावटी रुपमा गरेको हस्तक्षेपले तेलको कारोबार गर्ने दुई कम्पनीहरुलाई कारबाही गरेको थियो । तर त्यसपछि सरकारले कानमा तेल हालेपछि भने घटेको खाने तेलको मूल्य पुनः उकालो लागेको छ ।
अमृत सनफ्लवार एक कार्टुनको मूल्य २ हजार ८० रुपैयाँ पुगेको छ ।
हालै पछिल्लो पटक खाने तेलमा प्रति लिटर १० रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि भएको छ । व्यवसायीका अनुसार अमृत सनफ्लवार तेलको एक कार्टुनको मूल्य २ हजार ८० रुपैयाँ पुगेको छ । अमृत अन्नपूर्ण भेजिटेबल उद्योगबाट उत्पादन र बिक्री वितरण हुँदै आएको तेल हो । त्रिवेणी समूह अन्तर्गतको यो उद्योगलाई सरकारले बढी मूल्य लिएर बेचेको भन्दै तीन लाख रुपैयाँ जरीवाना गरेको थियो । सरकारको अनुगमनसँगै सनफ्लवार तेल लिटरमा १० रुपैयाँ मात्रै घटेको थियो । अहिले फेरि सबैजसो उद्योगले लिटरमा १० रुपैयाँ बढाएका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा परेको छ ।
खुद्रा ब्यवसायीको महंगो तर्क
खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले उद्योगीले आफु र होलसेललाई चलखेल गर्न मिल्ने गरी मूल्य बढाएको बताए । उद्योगीले मूल्य नबढाएको भनेपनि होलसेल पसलबाट खुद्रा व्यापारीले खरिद गर्दा मूल्य बढेको उनको भनाई छ । छोटो समयमा पटक पटक मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई बेच्नै समस्या भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ । ‘आज एउटा मूल्य, भोली अर्काे मूल्य भनेर बेच्न पनि गाह्रो भइसक्यो’– उनले भने । तिहारदेखि माघसम्म खाने तेलमा प्रति लिटर ५५ देखि ६० रुपैँयासम्म मूल्य बढेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनी भन्छन्– ‘वाणिज्य आपूर्ति विभागमा समेत यो बिषयको जानकारी गराएका थियौं ।’ तत्काल मूल्य बढ्ने कुनै कारण नभए पनि पहिले बढाएकोलाई आधार बनाएर मूल्यवृद्धि गरेकाले उपभोक्ता र खुद्रा व्यापारीहरु प्रत्यक्ष मारमा परेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।
तिहारपछि मात्रै लिटरमा ५५ देखि ६० रुपैयाँसम्म मूल्यबृद्धि भएको छ ।
गत तिहार यता लगातार तेलको मूल्य बढेपछि चर्काे मूल्य भएको भन्दै उपभोक्ताले बारम्बार गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, उपभोक्ताको गुनासो सरकारको कानसम्म पुग्न सकेको छैन ।
के भन्छन् उपभोक्ता अधिकारकर्मी ?
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई बहाना बनाउँदै व्यवसायीले उपभोक्तामाथि लुट मच्चाइरहेको बताए । उद्योगीको यस्तो चर्तिकलालाई सरकारले समेत सहयोग गरेकाले बजारमा खाने तेल लगायत अन्य खाद्य बस्तुमा चर्काे मूल्य तिर्न उपभोक्ता बाध्य भएको महर्जनको भनाई छ । व्यवसायीले चरम ज्यादती गर्दा समेत सरकार बेखबर रहेको उनको आरोप छ ।
सरकारले दुई ब्यवसायिलाई कारवाही गरेजस्तो गरेर झारा टारेको छ ।
त्यस्तै,उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मन्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य कमै बढेपनि त्यसको फाइदा उठाउँदै नेपालका व्यवसायीहरुले मनपरी मूल्यवृद्धि गरेको बताए । त्यसैमाथि सरकारको फितलो अनुगमनले व्यवसायीहरुको मनोबल झनै बढाएको अध्यक्ष तिमल्सिनाको भनाई छ । अनुगमन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा सरकार रमिते बनेको समेत उनको आरोप छ । उनले विभागमै गएर यस संबन्धी जानकारी समेत गराएको दावी गरे ।
सा–साना विषयमा आन्दोलित हुने विद्यार्थी संगठन र राजनैतिक पार्टीहरुले समेत तेलको चलखेललाई वास्ता गरेका छैनन् ।
सरकारी पक्षको थोत्रो तर्क
व्यवसायीले तेलको मूल्य अस्वभाविक रुपमा वृद्धि गर्दा पनि सरकार भने रमिते बनेको चौतर्फी आरोप छ । उपत्यकाका पसलहरुमा खाने तेलको मूल्य भिन्न भिन्न रहेको छ । एउटै तेलको मूल्य कसरी फरक ? यस प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ पनि सम्बन्धित निकायसँग छैन ।
सरकार अनुगमनमा नउत्रिएका कारण व्यवसायीहरुले मनपरी मूल्यवृद्धि गरिरहेको तितो अनुभव छ, आम उपभोक्तासँग । तर सरकार भने अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईले कृतिम रुपमा मूल्य बढाइएको रहेछ भने कारवाही गरिने बताएका छन् । अहिले बजार अनुगमन भइरहेको र समस्या देख्ने बित्तिकै कारवाही गर्ने उनको भनाई रहेको छ । कारवाही गरिने छ भन्ने प्रवक्ता सेढाईको झारा टार्ने भनाईले भने कुनै समाधान दिन नसक्ने पक्का छ ।